Okpomọkụ na-emetụta Europe na-ahapụ ugwu Alps na-enweghị snow | Netwọk Mgbasa Ozi
Foto - Ruptly
Na-agafe agafe? Ọ bụghị maka obere. Anyị anọ ụbọchị ole na ole ebe ọ bụ na n'ọtụtụ mpaghara Spain na Europe, Mercury na thermometers emetụla, ọbụlagodi, ogo 40 Celsius. Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oke ọkụ, ma ọ bụghị naanị n’obodo ma ọ bụ n’obodo nta, kamakwa na mbara igwe dị mma dịka Alps.
Snoo kwesịrị ikpuchi ugwu gị ọ na-agbaze ngwa ngwa gburugburu Stelvio Glacier ski Resort na Italian Alps.
Ebe onwere ogo ruru 12 Celsius, nke edebanyere aha ya na ubochi gara aga, abali isii nke onwa asato, 6, ugwu ndi ugwu Alps nke Italy na adacha nke snow. Ellọ ọrụ Stelvio Glacier pụtara na-adịghị ndụNa ụgbọ ala USB gbahapụrụ, ọ bụghị n'efu, ịgba ọsọ na ọnọdụ ndị a dị oke egwu yana mgbagwoju anya, nke mere na a manyere ha imechi mgbe ebighi ebi.
Dịka ị pụrụ ịhụ na vidiyo ahụ, nke drone kwadebere na igwefoto dere ya. ihe kwesiri ibu ocha achachala achapu oji ma obu oji. Naanị snow dị n’elu elu ya, o yighịkwa ka ha ga-anọ ogologo oge karịa.
Okpomoku oku na-emebi ihe, ya mere aha otutu a: lucifa. Na Spain, mpaghara 31 eruola ma ọ bụ na-erute okpomọkụ nke 40 Celsius ma ọ bụ karịa, ọ bụ ezie na ọ bụghị naanị mba a na-emetụta oke ihe a: Romania, Croatia na Serbia na-anwa ihu ihu nkwa ndị ga-abụ ebili nke ọkụ a na-agaghị echefu echefu, dị ka a kọrọ ABC News.
Kedu mgbe a ga-agwụcha ya? N'oge na-adịghị anya. N'ime ụbọchị ole na ole, okpomọkụ ga-alaghachi n'oge a n'afọ. N'ihe gbasara Spain, naanị ndị fọdụrụ na nchedo odo bụ Gran Canaria na Fuerteventura, dị ka AKEMKỌ, ma a na-atụ anya na ka izu na-aga, ahịa mercury na-aka akara okpomọkụ dị mma karị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ebili mmiri ọkụ » Oke okpomọkụ nke Europe na-ahapụ ugwu Alps na enweghị snow